Xog: Xildhibaan ka tirsanaa DFS oo fuliyey qaraxii Garoonka Aadan Cadde (Akhri warbixin) – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Ex-xildhibaan Saalax Badbaado oo horay uga tirsanaa Baarlamaankii KMG ahaa ee Somalia ayaa fuliyay mid ka mid ah weeraradii ismniidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay agagaarka Garoonka Diyaaradaha Aadan cadde sida ay caawa baahisay Al-shabaab.
Fariin cod ah oo laga duubay ka hor inta uusan fulin weerarka oo ay baahisay Idaacada A-Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayuu Saalax Badbaadow kaga hadlay weerarka uu fulinayo iyo ujeedada uu u socdo, isagoo dardaaran u diray shacabka Soomaaliyeed iyo xoogaga Al-Shabaab.
Shacabka ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ee Somaliland oo isagu uu degaan ahaan ka soo jeedo ayuu ugu baaqay iney taageeraan Al-shabaab ayna isku xukumaan shareecada Islaamka.
Ex-Xildhibaan Saalax Nuux Ismaaciil (Saalax Badbaado) oo ka mid ahaa Baarlamaankii KMG ee dowladii Shiikh Shariif ayaa sanadkii 2010 u goostay Al-shabaab tan iyo xiligaasna meel fagaare ah laguma arag.
Previous: DEG DEG: Maxay tahay sababta diyaaradda Turkish Airline ay rakaab la’aan uga duushay Aadan Cadde….
Next: Sawiro: Ciidanka NISA oo Gaari miineysan ka soo qabtay Hotel ku yaalla magaalada Muqdisho